Zvigadzirwa - Motio
musha 9 Products
Motio Zvigadzirwa izvo zvinoita kuti Analytics ive nyore
Natsiridza Hunhu & Kurongeka
Ndiwedzere Platform Performance
Wana Nguva Yekukurumidza KuMusika
Simbisa Management & Kudzora
Bvisa marwadzo kubva kuCognos kukwidziridzwa, kururamisa Cognos deployments, kudzoreredza dzadzimwa Cognos mishumo mumasekondi, otomatiki Cognos kudzokororwa kuyedzwa, mhanyisa analytics kuvandudza uye nezvimwe!
Wana kukosha kwakanyanya uye wedzera kugadzirwa kwako ne Soterre'Zero-yekubata vhezheni yekudzora, kuendesa, uye yekuongorora maitiro- kunyangwe uri kushandisa Qlik Sense kana IBM Planning Analytics, inofambiswa neIBM TM1.
Pamusoro pekudzoreredza yakarasika kana kukuvara Cognos Sisitimu mamodheru, Motio PI Professional inokupa iwe kugona kuve nechokwadi chechengetedzo mabasa, batch inosimbisa Cognos mishumo uye zvinhu, kunakidzwa nehupfumi kutsvaga uye kutsiva kubvisa zvinonetesa nguva inonyura, uye kuita nyika ye otomatiki kunyatsoita basa rako reCognos pfuma.
Chengeta Cognos kuita kwakakwenenzverwa neyakagadziriswa mhinduro inoongorora kuti papuratifomu yako iri kusaririra kupi uye riini.
Regai Motio batanidza yako IBM Cognos nharaunda kune yako yekuchengetedza zvivakwa neyedu inotsigirwa zvizere Tsika Yekusimbisa Provider kana SAML mhinduro.
Shandisa Persona IQ ® kufambisa mushe wako yeCognos zvemukati uye gadziriso kubva kune imwechete yekusimbisa namespace kuenda kune imwe-pasina kurasikirwa kweCAMIDs.
Uya neese data, masisitimu, uye nharaunda dzinonyanya kukosha kwauri mukati meimwe chete, inonzwisisika mushandisi ruzivo.
Yekutanga rutsigiro rwewebhu plugin iri nyore kushandisa iyo inobatanidza Qlik Sense nemupi wako weGit, ichigadzira kuteedzera uye kukanganisa kwekuchinja.
Zviitiko & Webinars
Isu tinoda kukubatsira kugadzirisa ako BI mabhodhoro! Ngatibatanidzei pane imwe yezviitiko zvinotevera uye webinars.